Ukukhuluma Ngolimi Lwezithameli Zakho | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Okthoba 1, 2010 NgoLwesihlanu, Okthoba 1, 2010 Douglas Karr
Kuyafaneleka kuphela ukuthi ngibhale okuthunyelwe mayelana nokuxhumana ngihleli egumbini lezingqungquthela eFrance. Izolo kusihlwa besidle isidlo sakusihlwa ngo-8PM nenkampani e Le Procope, indawo yokudlela endala kunazo zonke eParis (est 1686). Sasijabule - le ndawo yokudlela yayinabaxhasi abanjengoDanton, Voltaire, John Paul Jones, Benjamin Franklin noThomas Jefferson.
Kade saba nesikhathi esinzima ukuthola ama-cab lapha eParis (akuvamile). Ama-cab afika futhi ahambe lapho kuthanda khona bona. Silinde isigamu sehora noma ngaphezulu ehhotela futhi abanqolobane bezitolo basitshela ukuthi siqonde endaweni yamaTekisi ekhoneni. Ekhoneni eFrance kuningi kakhulu kunokukhoneni e-United States. Sahamba cishe isigamu sekhilomitha ngomgwaqo siya ezimpambanweni zendlela enetekisi yamaTekisi. Futhi lapho sama… eminye imizuzu engama-45. Ngalesi sikhathi siphuzile ukudla futhi besingakahambi!
Itekisi lethu ligcine liqhamukile, owesifazane omncane waseFrance osesondweni. Wabuza ngesizotha ukuthi siyaphi… saphendula. NgesiFulentshi wacela ikheli. Ngaphambilini ngangithumele ikheli ocingweni lwami kepha angizange ngilivumelanise ngakho-ke ngangingaqiniseki - ngaphandle kokuthi indawo yokudlela yayingaphansi kweLouvre. Emizuzwini emi-5 elandelayo sasihlafunwa ngothando ngamagama engangingakaze ngiwazwe selokhu uMama wabamemeza (uyiQuebecois) esemncane. Umshayeli wetekisi ubememeza ngokucace kangako, ngikwazi ukuhumusha…. “Izindawo zokudlela eziningi eParis”…. “Bekufanele ngabe ubabambe bonke ngekhanda”…. Mina noBill (esisebenzisana naye ebhizinisini) sahlala phansi sibhekise amakhanda phansi, sihlikihla ukuvalela isignali engenawaya futhi sithole ikheli.
Ngicindezelekile, ngacela ikheli kuBill. Ukhumbula yonke into… bekufanele akukhumbule lokhu. UBill wangibuka ngicindezelekile ngaphezudlwana kokukhululeka futhi waqala ukuphinda lokho ayecabanga ukuthi ikheli lizo… ngesiFulentshi. “Kungani ungitshela ngesiFulentshi? Isipelingi nje !!!! ” Uyipela ngegama le-French… ngizombulala. Ngalesi sikhathi, sibukeka njengo-Abbott noCostello bekhahlela izinqe zethu umshayeli wetekisi waseFrance othukuthele ocishe ube uhhafu wosayizi wethu.
Umshayeli wetekisi wethu waphuma! Washayela eshesha… ememeza futhi ekhala kunoma iyiphi imoto noma umuntu ohamba ngezinyawo onesibindi sokumngena endleleni yakhe. Ngesikhathi sifika enkabeni yeParis, mina noBill sasikwazi ukuhleka kuphela. Ngicoshe inkulumo yakhe engaphezulu… “ngigula ekhanda”… “yidle!” njengoba sasingena siphuma siminyaminya.
Ekugcineni, safika enkabeni yeParis.
Umshayeli wetekisi wethu wayengawazi umgwaqo (wayedinga umgwaqo onqamulelayo), ngakho-ke wasikhulula wathi asiwufune. Ngalesi sikhathi, besibonga ngokumangalisayo ngokuba sedolobheni, siphephile, futhi besize sihleke ngokunikezwa imidwebo esanda kuyibona. Ngamtshela ukuthi ngiyamthanda ngesiFulentshi, wangishaya wangiqabula… besisendleleni.
Sahamba sazungeza nedolobha ihora elilandelayo noma ngakhona… manje sekudlule amahora ama-2 sidlile. Ngalesi sikhathi, besinethemba lokuthi inkampani yethu iqale ukudla ngaphandle kwethu futhi sanquma ukuphonsa ithawula sizibambele ukudla kwakusihlwa sisodwa. Kungaleso sikhathi lapho sidlulisa khona i- I-Tex Mex Indiana indawo yokudlela… Mina noBill kwadingeka sobabili sithathe izithombe.
Sizungeze ikona futhi phambi kwethu bekukhona iLe Procope ngobuhle bayo bonke. Sangena ngaphakathi ngejubane futhi uweta wasitshela ukuthi inkampani yethu isekhona! Sihlanganyele ukuhleka okuningi njengoba silandisa ngezehlakalo zakusihlwa. Ukudla kwakusihlwa kwakumangalisa, futhi sathola abangane abasha.
Kwakukhona izifundo ezithile ezafundwa, noma kunjalo:
Ukuze ukhulume kahle nezithameli zakho, kufanele bakhulume ulimi lwabo.
Ukuze ukhulume kahle nezithameli zakho, kufanele baqonde namasiko abo.
Ukuze ufike lapho uya khona, kufanele wazi kahle ukuthi ukuphi lokho - ngencazelo eningi ngangokunokwenzeka.
Ungapheli amandla! Kungakuthatha ngaphezu kwendlela eyodwa yokufika lapho.
Lesi seluleko sidlulela eFrance naseNgilandi noma eFrance nase-Indiana. Yindlela esidinga ngayo ukubheka nokumaketha. Ukuze sikwazi ukuxhumana ngempumelelo, kudingeka sazi kahle ukuthi imakethe yethu ikuphi, lapho sifuna ukuthi babe khona, sisebenzise izindlela zokuzihambisa ngempumelelo ezingokwemvelo kubo, futhi zikhulume ngolimi lwabo - hhayi olwethu. Futhi uma ungaxhumi indlela yokuqala, kungadingeka uzame ezinye izindlela zokudlulisa umyalezo wakho.
Uma uzibuza… sithathe ongaphansi komhlaba sabuyela ehhotela. 🙂
Tags: iphrofayili yekhasimendeisifundo sokumaketha kwedijithaliimikhiqizo ye-finchI-IBM Smarter Commerceucwaningo lokumakethainhlolovo yezokumakethai-net plus
Okthoba 2, 2010 ngo-9: 58 AM
"Lapho kukhona igumbi lenkomfa, kuzofanele usungule elilodwa." - IVoltaire Finn.